??? ??????? ဖိုးသော်နဲ့အတူတူ ကြော်ငြာရိုက်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတဲ့ မေကဗျာ – Maythadin
??? ??????? ဖိုးသော်နဲ့အတူတူ ကြော်ငြာရိုက်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတဲ့ မေကဗျာ
ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေတောင် လိုက်လို့မမှီနိုင်တဲ့ အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးချော မေကဗျာကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း (၂၀) နီးပါး ရှိနေပြီတောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးမေမေတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မေကဗျာကတော့
သမီးလေးကိုလည်း ရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်နေသလို အနုပညာအလုပ်တွေမှာလည်း လစ်ဟင်းမှုမရှိအောင် ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ရရှိပိုင်ဆိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း မေကဗျာရဲ့ ဂုဏ်သတင်းက
ပရိသတ်တွေကြား ကောင်းသတင်းနဲ့ ကျော်စောနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ မရှိသလောက် လျော့နည်းနေတဲ့ မေကဗျာကတော့ ဒီကနေ့မှာ ပရိသတ်တွေအတွက် အမြင်ဆန်းစေမယ့် ကြော်ငြာတစ်ခုကို ရိုက်ကူးဖို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်း
ပြောလာပါတယ်။ မေကဗျာက “ကဲ ကဗျာကိုရိုက်ကူးရေးနှင့်မြင်ချင်သောအချစ်များအတွက် ကြော်ငြာရိုက်ကူးရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် စာချုပ်ချုပ်ကြသည်။ ??? ??????? မောင်လေးဖိုးသော်နှင့် ရိုက်ကူးပါမည်ရှင့်” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောလာပါတယ်။
မေကဗျာကတော့ ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ ??? ??????? ဖိုးသော်နဲ့အတူတူ ကြော်ငြာရိုက်ကူးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မေကဗျာတို့ရဲ့ ကြော်ငြာလေးထွက်ရှိလာရင် အားပေးကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဆယျကြျောသကျမိနျးကလေးတှတေောငျ လိုကျလို့မမှီနိုငျတဲ့ အလှကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မငျးသမီးခြော မကေဗြာကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျခဲ့တာ နှဈပေါငျး (၂၀) နီးပါး ရှိနပွေီတောငျ ဖွဈပါတယျ။ ကလေးမမေတေဈယောကျဖွဈတဲ့ မကေဗြာကတော့
သမီးလေးကိုလညျး ရငျအုပျမကှာစောငျ့ရှောကျနသေလို အနုပညာအလုပျတှမှောလညျး လဈဟငျးမှုမရှိအောငျ ကွိုးစားခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ ရရှိပိုငျဆိုငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့လညျး မကေဗြာရဲ့ ဂုဏျသတငျးက
ပရိသတျတှကွေား ကောငျးသတငျးနဲ့ ကြျောစောနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။လကျရှိမှာတော့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှေ မရှိသလောကျ လြော့နညျးနတေဲ့ မကေဗြာကတော့ ဒီကနမှေ့ာ ပရိသတျတှအေတှကျ အမွငျဆနျးစမေယျ့ ကွျောငွာတဈခုကို ရိုကျကူးဖို့ စာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့တဲ့အကွောငျး
ပွောလာပါတယျ။ မကေဗြာက “ကဲ ကဗြာကိုရိုကျကူးရေးနှငျ့မွငျခငျြသောအခဈြမြားအတှကျ ကွျောငွာရိုကျကူးရနျ ဆှေးနှေးတိုငျပငျ စာခြုပျခြုပျကွသညျ။ ??? ??????? မောငျလေးဖိုးသျောနှငျ့ ရိုကျကူးပါမညျရှငျ့” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ပွောလာပါတယျ။
မကေဗြာကတော့ ထူးထူးခွားခွားအနနေဲ့ ??? ??????? ဖိုးသျောနဲ့အတူတူ ကွျောငွာရိုကျကူးမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး မကေဗြာတို့ရဲ့ ကွျောငွာလေးထှကျရှိလာရငျ အားပေးကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
ယောကျာ်းဆီက​နေပြီ ပိုက်ဆံချက်ချင်းထုတ်ပေးအောင် ပညာသားပါပါနဲ့တောင်းပြခဲ့​သော ယွန်းရွှေရည်ရဲ့ဟာသ (ရုပ်​သံ)
ချမ်းချမ်းနဲ့ဘုဏ်းသိုက်တို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ကြားကနေဝင်နှောက်ယှက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးအားပြင်းထန်စွာသတိပေးခဲ့​သော ဂျွန်လွင်
​အောက်​တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစပြီး ၂၂ ရက်နေ့အထိကို နေ့စဉ် လူတစ်ဦးလျှင် ၁ သိန်းကျပ်​စီဖြင့်​ ၂၂ ဦးအား ရွေးချယ်လှူဒါန်းသွားမယ်​လို့ ​ပြောလာခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်